Madaxweyne Gaas oo ku taliyey in Doorasha uu musharraxa u yahay ay u dhacdo si cadaalad ah – Kalfadhi
Madaxweynaha Puntland ee uu xilkiisu ku eg yahay Talaadada soo socota, Cabdiwali Maxamed Cali (Gaas), ayaa sheegay inuu Guddoonka cusub ee Golaha Wakiillada Puntland u arko kuwii ugu haboonaa ee waqtigaan taagan hogaamin kara Baarlamaanka Puntland. “Waxaan aaminsanahay iney yihiin dad ku haboon, khibrad fiicanna u leh iney hogaamiyaan baarlamaanka” ayuu yiri Gaas.
Madaxweyne Gaas waxa uu sheegay inuu ka rajeynayo hogaanka cusub ee Baarlamaanka Puntland iney Golaha Wakiillada Dowlad Goboleedka Puntland ku hogaamiyaan wadajir, midnimo iyo cadaalad. Waxaa, isaga oo bogaadintaas sii sharraya uu yiri “waxaan aaminsanahay iney si fiican shaqada loo egmaday ee Xeer Dajinta iyo Sharci Sameynta ku hogaamin doonaan Baarlamaanka Puntland”.
Cabdiwali Maxamed Cali (Gaas) waxa uu ka mid yahay musharrixiinta 30-ka kor u dhaafeysa ee 8-da bishan, oo ku began Talaadada ina soo aaddan, kuwada tartami doona xilka Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland, kaas oo uu Gaas soo hayey ilaa sanadkii 2014-kii. Gaas waxa uu sheegay in doorashadaas uu musharraxa u yahay uu ka rajeynayo iney u dhacdo si cadaalad ah.
Sida ay u dhacday Doorashada Guddoonka Baaramaanka Puntalnd shalay ayuu ku tilmaamay iney ahayd xor iyo xalaal. Isla sidaas oo kale ayuuna sheegay inuu ka filayo tan Madaxweynaha, marka la gaaro 04/01/2019. Sidaas oo kale ayey iyana qaar ka mid ah musharrixiinta kale u bogaadiyeen Guddoonka cusub ee Golaha Wakiillada Puntland.